ရမည်းသင်းမြို့ ဗ.မ.က ရပ်ကွက်ရှိ ဖျက်ဆီးခံရသောကန်ကြီးဗလီသည် အင်းဝပုဂံခေတ် ကပင်တည်ရှိခဲ့သော သမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မဘသ အဖွဲ့ရဲ့ သာသနာတော် နဲ့ ပတ်သက်လာရင် ဘက်မလိုက်ပဲ ဘယ်သူ့မျက်နှာမှမကြည့်ပဲ အရေးယူဆောင်ရွက်တာကို ဘုရားကျွန်တော်မျိုး အထူးတလည်ထောက်ခံအားပေးပါတယ် ဆရာတော်ဘုရားတို့ …
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်မြှောက်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကို ရပ်တန့်ရန် ဦးဝီရသူမှ ထုတ်ဖော်ပြောကြား »
ရမည်းသင်းမြို့ ဗ.မ.က ရပ်ကွက်ရှိ ဖျက်ဆီးခံရသောကန်ကြီးဗလီသည် အင်းဝပုဂံခေတ် ကပင်တည်ရှိခဲ့သော သမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း
မူလအစ မှာ သက်ကယ်မိုး ဗလီဖြစ်ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းထိ သက်ကယ်မိုးနှင့်ရှိခဲ့သည်။
လှူဒါန်းသူများအနက် အလှူရှင် ပျဉ်းမနားသား ဦးမင်းဆင် တစ်ဦးလည်းထင်ရှားစွာ ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
ဦးမင်းဆင်ဆောက်လုပ်ဆင်တွင် မြန်မာမှု သစ်သားပန်းဆွဲပြားများဖြင့် ခန့်ညားပြောင်မြောက်စွာ မွန်းမံခဲ့ပါသည်။
(၁၉၆၇ ခုနှစ်အထိ ၎င်းလက်ရာများကျန်ရှိခဲ့သည်။)
၁၉၅၃-၅၄တွင် ရမည်းသင်းမြို့ မြေစာရင်းမှတ်တမ်းစတင်ပြုစုသည့်စာရင်းတွင် ကန်ကြီးဗလီပိုင်မြေ+ကန် ကိုစတင်မှတ်သားဖော်ခြင်းခံရပါသည်။
၁၉၆၃ တစ်နိုင်ငံလုံး မြေစာရင်းမှတ်တမ်းများ ပြန်လည်စီစစ်တော့လည်း ရွှေစည်းခုံနှင့်ဂေါရာသင်္ချိုင်း(အင်္ဂလိပ်သင်္ချိုင်း)ရှိပြီး၊
မြေပုံမြေရာဇ၀င်မှတ်တမ်းမိတ္တူမှန်ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းမိတ္တူမှန်မူရင်းကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် စတင်အငြင်းပွားမှုဖြစ်ရာတွင်
သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ စစ်ဆေးရန် သိမ်းဆည်းခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
၁၉၄၆-၄၇ ကာလက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဖဆပလ အဖွဲ့များ ဗ.မ.က ရပ်ကွက်ကန်ကြီးဗလီတွင်
၁၉၅၄-၁၉၆၃နှင့် ၂၀၀၇ ထိကန်ကြီးဗလီမှတ်တမ်းတွင် သက်ဆိုင်ရာမြေစာရင်း အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်မှု ရှိပြီးဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ရွှေစည်းခုံအမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
၁၉၅၄တွင် ကန်ကြီးဗလီ စတင်တည်ဆောက်သည့်ခုနှစ်မဟုတ်ဘဲ အဟောင်းကိုပြင်ဆင်ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။
်မိမိပင်မမွေးသေးသော သမိုင်းဖျောက်လိုသော သူများသည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်ဗမာမွတ်စလင်မ် လက်တွဲဆောက်ရွက်ခဲ့သော
သမိုင်းလက်ကျန်များကို စံနစ်တကျ ပြင်ဆင်ဖျောက်ဖျက်ရန်ကျိုးပမ်းနေခြင်းပေါ်လွင်သည်။
FB စာမျက်နှာတစ်ခုတွင် လက်သမားဆရာ ကျမ်းကျိန်လွှာ ကို ဖော်ပြလို့ရသည်ဟုတွေ့ရပါသည်။
လက်သမားဆရာကို ဘာသာရေးအရ မလျှော်သြဇာသုံးပြီး ကျမ်းကျိန်ခိုင်းခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။
သူအမှန်တကယ်ဆောက်လုပ်ခဲ့ခြင်း ရှိမရှိ ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ။ဗလီဖျက်လိုသောသူများတွင် သင်္ဃန်းဝတ်
သူများ စိတ်တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့သည်မှာ အထင်အရှားပင်ဖြစ်ပါသည်။(၀ိနည်းနှင့်ညီညွတ်သော ဆရာတော်သံဃာတော်များပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။)
ကျမ်းကျိန်လွှာတစ်ခုသည် တရားရုံးတွင် သက်သေခံမ၀င်ပါ။နိုင်ငံတော်မှလည်း တည်ဆဲဥပဒေအရ အသိအမှတ်မပြုပါ။
အင်းဝ၊ပုဂံခေတ် ရှေးဦးမဆွ ကတည်းက ရမည်းသင်း(ဗ.မ.က ရပ်ကွက်တွင်) အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များရှိနေပြီး
ကန်ကြီးဗလီတွင် ဗလီထိုင် ရှေ့ဆောင်ဆရာတော်အဆက်ဆက် ရှိခဲ့သည့်အနက်
ယင်းဆရာကြီးသည်အေဒီ ၁၇၆၅မှ အေဒီ ၁၈၂၀ အထိ ဘိုးတော်မင်းလက်ထက်မှ ဘကြီးတော်မင်းလက်ထက်အထိ
ရမည်းသင်းမြို့ ဗ.မ.က ရပ်ကွက် ကန်ကြီးဗလီတွင် ဗလီထိုင်ရှေ့ဆောင်ဆရာတော်အဖြစ်
ထမ်းဆောင်ရင်း ကျမ်းစာတော်များကို သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင် ၁၉၅၃-၅၄ ၊ ၁၉၆၃မှ ၂၀၀၇ အထိ မြေပုံမြေစာရင်းမှတ်တမ်းများမှာ
(နာဇီ ဟစ်တလာခေတ်တွင် ဂျူးလူမျိုးများက မည်သည့်မှတ်တမ်းမှတ်ရာ တင်ပြသည်ဖြစ်စေ လက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ Genocide လုပ်ခဲ့သည်မှာ သမိုင်းသက်သေဖြစ်ပါသည်။)
(မှတ်ချက် မကြာမီ သမိုင်းမှန်သိလိုသူများ ၊ သမိုင်းမသိသူများ ၊ သမိုင်းမလိမ်နိုင်ရန် ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်း ၊ ပါမောက္ခဦးဘသန်း ၊ တက္ကသိုိလ်နေ၀င်း ၊ ဗိုလ်မှူးဘရှင် ၊ဆရာဦးတိုးလှ
ဗိုလ်မှူးကြီးဝင်းမောင်တို့၏ ရမည်းသင်းအစ္စဘာသာဝင်များနှင့်ပတ်သက်၍ သမိုင်းမှတ်တမ်းပြုစုထားသောစာအုပ်မှ photo ဆွဲ၍ တင်ပြပေးပါမည်။)
This entry was posted on November 23, 2014 at 4:03 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “ရမည်းသင်းမြို့ ဗ.မ.က ရပ်ကွက်ရှိ ဖျက်ဆီးခံရသောကန်ကြီးဗလီသည် အင်းဝပုဂံခေတ် ကပင်တည်ရှိခဲ့သော သမိုင်းမှတ်တမ်းအကျဉ်း”
November 23, 2014 at 4:25 am | Reply
နှစ်ပေါင်း ၃၅၀ လောက်သက်တမ်းရှိတဲ့ ဘာသာတစ်ခုရဲ့ အဆောက်အဦးကို ဖြိုပြီး ကိုယ့်ဘာသာပြန့်ပွားဖို့
အဆောက်အဦးဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ရပ်ကို IS တို့ အလ်ကိုင်ဒါသာ တို့သာလုပ်လိုက်ကြည့် ဂျာနယ်တွေ၊သတင်းစာတွေရဲ့ မျက်နှာဖုံးမှာ စာလုံးမည်းကြီးတွေနဲ့ ရေးကြမယ် အခု ပြည်တွင်းက မဘ.သ ကလုပ်တော့ ဂျာနယ်အတွင်းမှာ သာမာန်သတင်းတစ်ပုဒ် အနေနဲ့တောင် မရေးကြဘူး….
မြန်မာပြည်မှာ အစိုးရမပြောနဲ့ အတိုက်အခံ အစ မီဒီယာအဆုံး ဦးနှောက်တွေ ၀ဲစွဲနေတယ် စိတ်ဓာတ်တွေက အ၀ီစိကပ်နေတယ် အဝေးကြီး အေရသ်က ခရစ်ယာန် လူနည်းစုတွေ အကြမ်းဖက်ခံရတော့ သနားကြတယ် ဖျက်ဖျက်လူးနေကြတယ် ကိုယ့်နိုင်ငံထဲက လူနည်းစု မွတ်စ်လင်တွေ၊ကချင်ပြည်နယ်က ခရစ်ယာန် အဖိနှိပ်ခံနေရတာ အကြမ်းဖက်ခံနေရတာကြ သနားရကောင်းမှန်းမသိ ကြဘူး….
အလ်ကိုင်ဒါက မြန်မာပြည်ကို အကြမ်းဖက်မယ်ဆိုပြီး ကြော်ညာတော့ လူနည်းစု မွတ်စ်လင်တွေကို ကန့်ကွက်ခိုင်းတဲ့ ရှုံချခိုင်းတဲ့ သူတွေက ကိုယ့်ပြည်တွင်းမှာ မွတ်စ်လင်တွေ မ.ဘ.သ ရဲ့ အကြမ်းဖက်တာကို ခံနေရတာကျ တစ်ခါမှ ကန့်ကွက်တာတွေ ရှုံချတာတွေမလုပ်ဖူးဘူး…..
လူမျိုးဘာသာမခွဲခြား မြန်မာနိုင်ငံသားတို့ ဆိုတဲ့ စကားလုံးလှလှလေးတွေကို….